ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကုထုံး အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအတွက် လမ်းညွှန်
အကယ်၍ သင်သည် ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရခဲ့သည်၊ ခွဲစိတ်မှုခံယူပြီးပါက သို့မဟုတ် လေဖြတ်ခြင်းခံရပါက၊ သင့်အား ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် သင့်ဆရာဝန်မှ အကြံပြုနိုင်ပါသည်။ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကုထုံးသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အား ပြန်လည်ကျန်းမာလာချိန်တွင်၊ သင်ဆုံးရှုံးသွားသော ကျွမ်းကျင်မှုများကို ပြန်လည်လေ့လာရန် သို့မဟုတ် အသစ်တွေ့ရှိလာချိန်တွင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အား ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန် ထိန်းချုပ်ထားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
အာရုံကြောဇီဝဗေဒ သုတေသနအတွက် ပရိုတင်းဇီဝဗေဒ ထုတ်ကုန်များ
အာရုံကြောဇီဝဗေဒသည် သက်ရှိသိပ္ပံသုတေသန၏ အရေးကြီးဆုံးနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ နယ်ပယ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး လျင်မြန်စွာ ဖြစ်လာသည်။အာရုံကြောဇီဝဗေဒ နယ်ပယ်တွင် အာရုံကြောစနစ်၏ ဆဲလ်များသည် သတင်းအချက် အလတ်များ လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် အပြုအမူဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများကို ပြေလည်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်း လေ့လာခြင်း ပါဝင်သည်။အာရုံကြောစနစ်သည် အာရုံကြောများနှင့် အခြားဆဲလ်များကို ပံ့ပိုးပေးသော ဆဲလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
☛ ရောဂါရှာဖွေရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် ☛ Microbiology Informatics သည် ဓာတ်ခွဲခန်းဝန်ထမ်းများအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ အကျိုးသက်ရောက်စေရန်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကို အမြန်လုပ်ဆောင်ရန်၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမြှင့်တင်ရန်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ရိုးရှင်းစေရန် ☛Microbiology Informatics Solution သည် ဓာတ်ခွဲခန်းဝန်ထမ်းများအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ခွင့်ပြုပေးသည်...
ကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်းတွင် အောက်ပါအဓိကအချက်လေးချက်ပါ၀င်သည်- Cell Culture Supernatant Component Analysis ဤတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သက်ရောက်မှုရှိသော အဓိကအကြောင်းရင်းများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အဓိကအကြောင်းရင်းများကို ဖော်ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ် ကိုးကားသည့်နည်းလမ်းကို ပံ့ပိုးပေးထားသည့် ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှု supernatants များ၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကို ဖော်ပြထားပါသည်။ဇီဝဗေဒ၏ အထွက်နှုန်းနှင့် အရည်အသွေး...
Biopharmaceutical အတွက် ဖြေရှင်းချက်များ
ဇီဝဆေးဝါးများအတွက် ဖြေရှင်းချက်များတွင် အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါ အပိုင်းများ ပါဝင်သည်- 1. Bioanalysis LCMS Bioanalysis of Antibody Drugs of Antibody Drugs Bioanalysis of Fab-Selective Proteolysis nSMOL – Trastuzumab analysis LCMS Bioanalysis of Antibody Drugs of Antibody Drugs Bioanalysis of Fab-Selective Proteolysis nSMOL - Bevacizumab analysis LCMS Bioana...
သွေး၊ ပလာစမာ၊ သွေးရည်ကြည်နှင့် ဆီးတစ်ခုလုံးကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် လက်တွေ့သုတေသနတွင် အမြော်အမြင်အရှိဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာစနစ်များ၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းသည် တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသောကြောင့် သုတေသနရလဒ်များနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုလည်း တိုးလာခဲ့သည်။လက်တွေ့အသုံးချမှုတွင်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု...
ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သုတေသနအတွက် ဖြေရှင်းချက်များအား သင့်အတွက် ပံ့ပိုးပေးထားသည်။သင့်ဆဲလ်ကုထုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် သင်ဘယ်မှာရှိနေပါစေ၊ သင့်ဆဲလ်ကုထုံးရည်မှန်းချက်များ- စီးပွားဖြစ်ရောင်းချမှုအထိ တစ်လျှောက်လုံး သင့်အား ကူညီအောင်မြင်ရန် ဖြေရှင်းချက်များစွာရှိပါသည်။1. Discover ဆဲလ်ကုထုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် ရှည်လျားသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်၊ ခ...
မော်လီကျူးဇီဝဗေဒ လုပ်ငန်းအသွားအလာ ဖြေရှင်းချက်
မော်လီကျူး ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များသည် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက် သင့်လျော်သော သိပ္ပံပညာကို မြှင့်တင်ရန် သင်ရှာဖွေရာတွင်၊ စမ်းသပ်မှုတိုင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ပြန်စဖို့ အချိန်မရှိဘူး။ဤလက်စွဲစာအုပ်သည် မော်လီကျူးဇီဝဗေဒလုပ်ငန်းအသွားအလာတစ်လျှောက် နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် ရှင်းလင်းသောရွေးချယ်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် သင့်အား လမ်းညွန်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။အသုံးချထုတ်ကုန်များ...
PCR (qPCR) ဖြေရှင်းချက်များ
သင်အလိုရှိသောအရာကိုအောင်မြင်ရန်ဖန်တီးထားသော PCR ဖြေရှင်းချက်များသည် သိပ္ပံပညာကို မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းရာတွင်၊ စမ်းသပ်မှုတိုင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ ပြန်စရန် အချိန်မရှိတော့ပါ၊ သင်ရွေးချယ်ထားသော ထုတ်ကုန်များသည် သင့်အား နောက်ပြန်ဆွဲမလား သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြည့်စုံသောအပူပေးစွမ်းမှုဖြင့် သင့်ရှေ့သို့ တွန်းပို့ပေးမည်လားဟု တွေးနေစရာမလိုပါ။ စက်ဘီးသမားများ၊ PCR ပလပ်စတစ်...
ဤအက်ပလီကေးရှင်း Compendium သည် မတူညီသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်များတွင် ဇီဝဆေးဝါးများ၏လက္ခဏာရပ်များအတွက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလိုအပ်ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်သည် - ဆဲလ်လိုင်းစစ်ဆေးခြင်းမှ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအထိ။အဓိကအကြောင်းအရာတွင်- ❋Intact ပရိုတင်းများ- ခိုင်ခံ့ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ခွဲခြားမှုနှင့် တိုင်းတာမှုပေါင်းစပ်မှုကြောင့်...